Dhagaysiga Dacwadda Muran-badeedka Soomaaliya iyo Kenya U Dhexeeya oo maanta la soo gabagabeynayo – WARSOOR
Dhagaysiga Dacwadda Muran-badeedka Soomaaliya iyo Kenya U Dhexeeya oo maanta la soo gabagabeynayo
Hague – (warsoor) – Magaalada Hague ee Dalka Netherlands ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa dhagaysigii doodda ku saabsan muranka-badeedka u dhaxeeyay Qareenada Dawladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Dhageysiga Dawcadda ayaa socotay illaa iyo Isniintii la soo dhaafay, taasoo dhexmaraysay Qareennada u kala doodayay Waddamada Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda ah ee labada waddan ay isku haystaan.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee fadhigeedu yahay Magaalada Hague ayaa dhagaysaneysay doodaha oo ay Soomaalidu dacwad u gudbisay, taaasoo ay ku dooneyso in maxkamaddu ay qaaddo dacwadda ku saabsan xadeynta xuduudda badda ee labada Dal ay ku muransan yihiin.
Qareennada Dawladda Soomaaliya ayaa maanta jeedinaya dooddii ugu dambeysay ee dacwadda la xariirta Murun-badeedka ay isku hayeen iyaga iyo Dawladda Kenya.
Dawladda Kenya ayaa weli ku adkeysaneysaa in Maxakamaddu aaneey qaadi karin Dacwaddaan, iyadoo ku andacoonaysa in maadaama ay Soomaaliya horey ula saxiixatay Kenya heshiis is-afgarad ah loo baahan yahay in labada dhinac ay iyagu is xaliyaan, balse mar walba waxaa ka biyo-diida dhanka Soomaalida.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Siyaasiyiinta Iga Digay Inay Shacbiga Ugu Baaqaan Kacdoon Siyaasadeed